FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ST. WEILER - ALIKA
Alika mifangaro mifangaro Rottweiler / Saint Bernard
Madison the St. Weiler (hazo fijaliana Rottweiler / St. Bernard) amin'ny 2 taona
Ny St. Weiler dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Rottweiler ary ny Saint Bernard . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Registra ny famolavolana endrika = St. Weiller
Designer Dogs Kennel Club = Saint Weiler
Mpanoratra International Canine Registry®= Saint Weiler
'Coosa dia alika kely efa 3 volana nogadraina rehefa nahita azy teo amin'ny toeram-pialofana alika teo an-toerana aho. Nangalariny ny foko. Nisy hoditra nanarona ny tavany ary nanana tongotra lehibe izy. Tamin'izany fotoana izany dia tsy fantatray ny momba ny fiompiana. Nilaza ny dokotera fa nanana Mastiff vitsivitsy niaraka tamin'i Labrador izy. Afaka nitondra azy nody aho rehefa afaka herinandro satria tsy nisy niditra nitaky azy. Milanja 38 kilao izy, mbola nify alika kely ary nilaza tamiko ny mpitsabo biby fa tokony ho 3 volana izy. Nanana fizahana ara-pahasalamana, fandroana, fanaovana vaksiny marobe izy, ary tamin'ny farany dia nasiana microchip ary nandrora. Ankehitriny dia milanja 92 pounds izy ary ampahany amin'ny fianakavianay amin'ny roa taona.
'Nampiasa ny filozofia Cesar Millan aho tamin'ny fampiofanana azy. Nanomboka tamin'ny andro voalohany dia izay ihany no nampiasako azy ary izy no lasa alika mpihetsiketsika indrindra, tia olona, ​​tia alika, mandefitra saka, be sy matanjaka alika nananako. Mifandray amintsika toy ny mino izy fa mahatakatra azy isika. Izy tia rano amin'ny kilalao rehetra. Ny tena mahavariana an'i Coosa dia ny faniriany ho namana. Rehefa fotoanan'ny sakafo ho an'ny soavaly dia miarahaba azy ireo rehefa mihazakazaka any amin'ny fivarotana izy avy eo mandry ao anaty mololo ary miara-mihinana ny mololo miaraka aminy raha manao raharaha ao an-tsompitra aho.
'Coosa dia tena faly sy miasa. Tsy haiko raha afaka nitantana azy aho raha tsy noho i Cesar sy ny fiofanany ho ahy sy ny alikako! Mila manampy tantara kely iray hafa aho. Fony 9 volana i Coosa dia nampidiriko tao amina magazay fivarotana sakafo alika, saka ary soavaly. Alika iray hafa no niditra niaraka tamin'ny tompony raha mbola teo izahay. Nieritreritra aho fa nijery ny kambana an'i Coosa !! Niakatra tany amin'ny tompony aho ary niresaka azy ireo momba ny alik'izy ireo. 9 volana i Mojo mazava ho azy fa ny alikanay dia mitovy amin'ny fako ihany. Ity dia vondrom-piarahamonina kely misy olona 16000 fotsiny amin'ny faritany lehibe iray manontolo. Mojo dia nivoaka tamin'ny a fako zaza sivy . Ny reny dia a Rottweiler , i Dada dia St. Bernard . Tsy nahy ny fiompiana, purebrida ny ray aman-dreny. Ary samy nanana ny toetrany ireo alika roa ireo. '
St. Bernard / Rottweiler mampifangaro alika kely amin'ny 7 ½ herinandro
Rouge ny alika kely St. Weiler amin'ny 7 herinandro
Rouge ny tri We-loko St. Weiler (Rottweiler / Saint Bernard mix dog) amin'ny 3 taona
Kiya the Saint Weiler toy ny alika kely 4 volana— 'Tena mora nampiofana sy nahalala izy baiko fototra toy ny mipetraka, mihozongozona, mandry, mihodinkodina, miteny ary tonga. Ny sipako dia maka an'i Kiya mandeha lavitra ao amin'ny valan-javaboary imbetsaka isan-kerinandro ary manana tokotanin-trano lehibe iray izay ahafahany mamela malalaka tokoa. Tianay ny mahita azy mihazakazaka satria faly be izy ary manana io volom-bolo mahavariana mijoro mahitsy eo an-damosiny io. Kiya no zazavaviko vavy malalako ary tiako izy! '
Kiya the Saint Weiler amin'ny maha alika kely azy
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny St. Weiler
Sarin'i St. Weiler
anglisy taloha bulldog beagle Mix
frantsay bulldog hazo fijaliana bulldog anglisy
shar pei sy pitbull mix
ohatrinona ny haben'ny haben'ny omby
akita alemanina mpiandry ondry afangaro alika kely hamidy